Tusaha ugu weyn ee nolosha, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Miyaad u baahan tahay baraarug noloshaada? Duufaano Nololeed Isku dayaya inay kugu laayaan dariiqyada dhabta ah? Dhibaatooyinka qoyska, shaqo luminta, dhimashada qof aad jeceshahay ama jirro halis ah waxay ku hanjabayaan inay gurigaaga baabi'iyaan. Dabeysha loogu talagalay noloshaada iyo aasaaska gurigaaga ayaa ah rajada hubaal ee badbaadada xagga Ciise Masiix!
Tijaabooyin ayaa kugu daadanaya sida hirar ku soo dhacaya markab. Badaha ayaa kor kaaga soo baxa. Masajooyin biyo ah oo ku rogmadaaya maraakiibta sida gidaar oo si fudud u dumiya - warbixinnadaas oo kale muddo dheer ayaa loo tuuray inay yihiin sheekooyin badmaax. Hada waad ogtahay: Waxaa jira mowjado daanyeer ah. Markaas xusuusta baddii si nabad ah loogu raaco biyaha macaan. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira fikrado keliya oo ku saabsan hawsha samatabbixinta ee socota. Su’aashu waxay tahay: badbaada ama maydh? Si kastaba ha noqotee, si aad uga hortagto duufaanta nolosha, waxaad u baahan tahay baraarug si uu kuugu meeleeyo. Tan ayaa kaa ilaalinaysa inaad ku daadiso xeebta dhaadheer.
Kitaabka Cibraaniyada wuxuu leeyahay waxaan leenahay barro, waa rajo rajo badbaadin ah xagga Ciise Masiix: oo labaduba aan loo dulqaadan karin. Waxay noo tahay dhiirogelin xoog leh inaan sameyno wax walba oo aan kari karno si aan u gaarno yoolka aan higsanno ee mustaqbalkeenna ah. Rajadayaduna waa magangalkeenna; waa badbaado adag oo adag oo nolosheena ah oo nagu xirta gudaha meesha quduuska ah ee jannada, meesha bannaan ee ka dambeysa daahyada » (Cibraaniyada 6,18: 19 Tarjumaadda New Geneva).
Rajadaada nolosha weligeed ah waxay ku xidhan tahay jannada dhexdeeda, halkaas oo duufaanta noloshaadu aysan waligeed marin karin markabkaaga! Dabaylkii ayaa weli soo socda oo xanaaqa kugu haya. Hirarka ayaa ku soo dhacaya, laakiin waad ogtahay inaadan ka cabsanaynin. Barafkaagu wuxuu ku xidhan yahay cirka aan la arki karin. Noloshaada waxaa badbaadiyey Ciise qudhiisa iyo weligiisba! Waxaad leedahay xiro qaac nolosha oo ku siinaysa deganaansho iyo xasillooni markii noloshaada ay si dhib leh ku dhacdo.
Ciise wuxuu ku baray wax la mid ah wacdintii buurta: Sidaa darteed mid kasta oo ereyadayga maqla oo yeelaa, wuxuu u eg yahay nin caqli badan oo gurigiisa ka dhisa dhulka dhagax weyn. Dabadeed markii daruuro dhacdo oo baaxadda biyaha daadadku galaan oo markay duufaanadu ku dhufato oo guriga xoog ku qabsato, ma dumiso; Waxay ku dhisantahay dhul dhagax ah. Laakiin mid kasta oo ereyadayda maqla oo aan yeelin, wuxuu u eg yahay nacas nacasnimadiisa gurigiisii ​​ka dhistay ciid ciid. Dabadeed markii daruuro dhacdo oo baaxadda biyaha daadadku galaan oo markay duufaanadu ku dhufato oo ay guriga xoog ku qabsato, way dumaa oo dhammaantood way burburaan » (Mat. 7,24-27 tarjumaadda New Geneva).
Ciise wuxuu sharraxayaa laba kooxood oo dad halkan ah: kuwa isaga raaca , iyo kuwa aan isaga raacin. Labaduba waxay dhisaan guryo muuqaal wanaagsan waxayna noloshooda hagaagi karaan. Daadadkii iyo hirarkii xumaa ayaa ku dhacay dhagaxii (Ciise) oo ma dhaawici karo guriga. Dhageysiga Ciise ma hor istaago roobka, biyaha iyo dabaysha, waxay ka hortageysaa isku-buuqa. Markay duufaantu nolosha ku soo garaacdo, waxaad u baahan tahay aasaas adag oo xasilloonidaada ah.
Ciise wuxuu nagula taliyaa inayaynu dhisno nolosheena maqalka ereyadiisa, laakiin aan ku dhaqan galno. Waxaan ubaahan nahay wax kabadan magaca ciise. Waxaan ubaahanahay inaan diyaar u nahay inaan sameyno waxa uu yiraahdo. Waa inaan Ciise ku aaminno nolol maalmeedka oo ku noolaano iimaan. Ciise wuxuu ku siinayaa doorashada. Wuxuu dhahaa maxaa dhici doona haddii aadan isaga isku hallayn. Dabeecaddaada ayaa muujineysa inaad rumeysaneysid oo aad isaga aaminaysid.